Maria Sharapova oo laga ganaaxay ciyaaraha Teenis-ka – Gool FM
Maria Sharapova oo laga ganaaxay ciyaaraha Teenis-ka
Byare June 9, 2016
(Moscow) 09 Juunyo 2016. Maria Sharapova oo mar ahayd No.1 ciyaaraha Teenis ka ayaa la ganaaxay labo sano kaddib markii ay ku dhacday tijaabada daraagiska ee la marsiiyay bishii Janaayo ee tartanka Australian Open.
Gabadha reer Russia ayaa lagu helay maadada Meldonium ee loo isticmaalo cudarada wadnaha kaa oo laga mamnuucay tartanka 1-da bishii Janaayo.
Waxay qirtay Maria inay isicmaali jirtay Meldonium 10-kii sano ee la soo dhaafay iyadoo u isticmaali jirtay xaalado caafimaad sida, wadnaha iyo kaadi macaanka.
Laakiin Maria Sharapova ayaa qirtay inaysan aqrin warbixintii la soo saaray bishii December taa oo ku aadanayd in ciyaartoyda laga bilaabo 1-da Janaayo laga mamnuucay maadadan Meldonium oo ay iyadu u taqaano mildronate.
Sikastaba, gabadhan 29-jirka ah ayaa sheegtay inay ku dagaalami doonto sidii ay racfaan uga qaadan lahayd ganaaxa labada sano ee lagu riday.
DEG DEG: Michael Carrick oo qandaraas cusub u saxiixay Manchester United...Waa meeqa sano?)
“Lionel Messi malahan shaqsiyad.” Maradona